Zithuthelekela - Iyini? Okwakushiwo lucebe zezwi. Okuqukethwe kanye kumiswa imihlambi
Ngo Ozhegova isichazamazwi incazelo yegama elithi 'umhlambi "uchazwa ngokuthi umhlambi omkhulu wezimvu. Futhi, kungaba ngokuvamile lizwakale isichazamazwi abalimi abanolwazi, ngingabazi nakancane lokho abakufaka kuwo. Nokho, lokho okushiwo yinkulumo definition enikeziwe Ozhegova, hhayi ngempela ngokwanele ukuqonda ngokuphelele ukuthi umhlambi. Kanjani imigomo eminingi kufanele ibe umhlambi, kanjani futhi kungani wawubumba is - konke lokhu uzothola kulesi sihloko.
Otar - lo muntu uye wadala nabo umhlambi wezingulube eziningi imvu okuqukethwe kwabo ngokuhlanganyela nokuklaba.
Umhlambi wakha kusukela yezimvu. Lapho zikhula ukuze ube neminyaka ethile ubudala futhi ubisi lukamama kubo akwanele, kancane kancane ukuhlanganisa singene emhlambini phila ngaphandle emadlelweni.
Lo mbhangqwana wokuqala amasonto yezimvu kakhulu behlukene abadala. Basuke zigcinwe ebiyelwe ehlukile. Izinto ezilandelayo kunakwe lapho ukwakha imihlambi:
Ubulili besikhumba saleso silwane.
Ngo amapulazi amakhulu kungenziwa imihlambi kwakhiwa, kuncike umbala kumbe udabuka ngaphi, osayizi ekhethekile, njll
Ukubhidlika angamaduna imihlambi kwenziwe ezinyangeni ezimbalwa kuze kube next kokuzalela izilwane. Ngaphambi kwalokhu, izimvu kumele babe behlolwa ngudorhodera, ukwenza wonke nemigomo edingekayo futhi ukuqeda izimuncagazi. Njengomthetho, zonke lezi zindlela eyenziwa ngosuku olulodwa. Zithuthelekela - iqembu kahle esihlelwe. Ngakho izimvu nazo zonke izinqubo ngokushesha, ngokunembile futhi kuhambisana Nomgomo oda.
Bangaki izimvu emhlambini?
Umhlambi, definition ayinazo izibalo, siqukethe izinkomo eziningi ezincane.
Isibalo imvu emhlambini incike ubukhulu umnotho. Futhi ku kucatshangelwa inani yezinkomo abathintekayo. Ngokwesibonelo:
Umhlambi wethers abadala ongafinyelela afika kwangu-1,000 ikhanda.
Lesizalo umhlambi - 850 imigomo.
Otar yarochek - 600-700 amakhanda.
Ngokuzalanisa imvu ugcine kakhulu futhi yarochek - 600-700 amakhanda.
Zithuthelekela abakhiqizi - imigomo 100.
Sheep "iphenya" - 250 imigomo.
abantu Enezithelo umhlambi uhlale enkulu kunemicebo isizwe.
Okuqukethwe kwemihlambi yezimvu
Okuqukethwe izimvu abalimi izindleko ishibhile kuka okuqukethwe kwanoma iliphi nezinye izilwane. Sheep bayakwazi ukuthola ukudla yabo ngisho nasehlane akude, ezingeke ishiwo izinkomo ezidinga eliphezulu emadlelweni aluhlaza.
Leli bhokisi lezi zilwane nesingakhangi. Esikhathini esiningi umhlambi ophethe umoya ohlanzekile, okuyinto kwandisa umthamo uvolo.
Ebusuku, umhlambi kwaholela peni ngaphansi canopies ukuze bazivikele lihlaselwa eziyingozi. Ebusika izimvu igcinwe kwezibaya. Abanaso amele eziyinkimbinkimbi imiklamo yobuciko. Lena Igumbi izimpumputhe nge phansi zobumba. Udoti sibaya akudingi esikhundleni njalo ngoba izimvu imfucuza ayinayo nephunga edabukisayo.
Kule singaphetha ngokuthi umhlambi - indlela okuzuzisa kakhulu ukwenza imali ngokuqukethwe wezimvu nezimbuzi.
amasonto ayisithupha ngaphambi ngokumitha kwemihlambi ngaphakamisa imvu idluliselwe isidlo esikhethekile. Ukudla Its kuhlanganisa hay abakhethayo, izimpande, njll Into esemqoka - ukuze siqiniseke ukuthi izimvu kungukuthi ukuthola isisindo okweqile, ukudla kufanele kube okuphelele nokunomsoco. IWundlu futhi bazitike ushizi, imifino impande kanye amaqanda aluhlaza.
Ukuze izimvu ekhuleliswa abanikazi siqakathekile. Ukuze ugweme kwesisu, akunakwenzeka ukungethusa omama abakhulelwe, ukhathazeke futhi ngenxa yokusebenza ngokweqile. Ukudla kufanele kulekelelwa ufulawa amathambo wokulinganisa ngoba umthombo ezengeziwe calcium.
Usizo nezimvu nokubeletha, njengoba umthetho, kungadingeki. Kodwa uma kwenzeka yezinkinga kuhle ukuba wezilwane ku Inombolo ngesandla. Uma iwundlu okuzelwe, izimvu kufanele inikwe amanzi okuphuza. Khona-ke kubalulekile ukucwenga colostrum sokuqala, ngoba It is kakhulu bagxila, okungase ukulimaza iwundlu. Bese ungagcina off ingane ukudla.
Humusha iwundlu likhule ukudla ngangokunokwenzeka ngemva izinsuku zokuphila 20. Kufanele kwenziwe kancane kancane, eziqala hay esithambile. Isiphetho on emadlelweni etholakalayo ngenyanga yesine zokuphila iwundlu. Ngemva amawundlu aqala ukuhoxa ku ziklabe, lamawundlu yarochek kudingeka ukuze wehlise umoya. Ezinyangeni ezinhlanu aqala ukuthomba, okungaholela kokuzalela of nokuzwelana eduze kwabantu ngabanye. Of ukulalana kwezihlobo ingase izalwe inzalo ababuthakathaka futhi engaphelele. Ngokocansi yobudala elivuthiwe imvu ukufinyelela eyikhulu nengxenye.
Otar - akusiyo nje wezimvukazi. Ngamunye wabo kudinga ukunakekelwa abathile. ngoba esikhathini esiningi izimvu kwenziwe emgwaqeni, angaphansi ukuhlaselwa ehlelekile ezidala. Izibungu usizo ukubabulala okugeza ne ukwengeza 1% isixazululo kreolina.
Ebusika, izimvu kuyinto cishe aphume bullpen, ngakho udinga ukuba lokhozi izinselo zazo. Sikwazi ukukhula ukuthi kuzokwenza ubuhlungu isilwane.
Uvolo ovela ezimvini kukhula ngokushesha ngokwanele, ngakho kudingeka uqaphe lapho ehlelekile ukusika. Uma ungakaze kwenziwe, kungcono ukuphathisa lo msebenzi ochwepheshe. Phakathi haircuts awukwazi esabisa isilwane futhi ukumzwisa ubuhlungu. Kanjani ukhululekile kuyoba ukugunda izinwele kuqala at the bar, kunamathuba amaningi okuthi kungenzeka uzoya olandelayo.
Ukudlwengula njengoba umquba oluhlaza - ngesisekelo isivuno high
Ngingawaxosha amazinyo ngaphambi kwesakramente? Yini engakwazi futhi engeke ibe khona ngaphambi kokudla?
Bangaki nezikhala ice hockey
Ngiyiphi inarha lapha yilona TNCs ngobukhulu?
Svetlana Kuznetsova - tennis umdlali emelela Russia ngesikhathi sokugcina WTA umncintiswano
Perfume Lacoste - elikhanyayo, fresh, ekhululekile!
Isifinyezo nokuhlaziya: "Ukushona Ermak" (Ryleev)